ဘဏ်သတင်းအချက်အလက် | USAHello | USAHello
သင်ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်ရှိသည့်အခါ, သငျသညျအဘယျသို့သင်တို့ငွေနှင့်အတူလုပ်ဖို့အဘယ်သူယုံကြည်စိတ်ချဖို့မသိစေခြင်းငှါ. Some newcomers are afraid to use banks. သင်တစ်ဦးဘဏ်မှာလူစိမ်းရန်သင့်ပိုက်ဆံပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဦးနှောက်အာရုံကြောခံစားရပေမည်. သငျသညျရှေ့တျော၌ဘဏ်သုံးဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုတွေးမိဖူးဘူးဖြစ်နိုင်သည်. This page has bank information to help you understand the US system.